ILes Etangs d'Arts: Isidlo sakusasa seB&B esimnandi sibandakanyiwe - I-Airbnb
ILes Etangs d'Arts: Isidlo sakusasa seB&B esimnandi sibandakanyiwe
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguCarole Et Jean-Marc
UCarole Et Jean-Marc yi-Superhost
Siyakwamkela kwilali yethu encinci eqhelekileyo yaseBurgundi, embindini weelali ezidumileyo ezifana neMeursault 2km kude kunye nePuligny-Montrachet, Pommard 7km kude, Beaune 12km kude. Uya kuba nendawo yokuhlala epheleleyo, ezimeleyo ngokupheleleyo kwindlu yethu ngokungena kwakho. Siza kukwamkela endlwini yethu kwisidlo sakusasa apho siza kuthatha ixesha lokukucebisa ngayo yonke imisebenzi. Umzimba wamanzi okuqubha ubekwe kumgama oziikhilomitha ezi-5 ukusuka endlwini kunye namachibi okuhamba umgama oziikhilomitha ezi-2.
Indlu encinci entsha, enendawo yokutyela, enegumbi lokulala elinendawo yokulala eyi-160/200, igumbi lokuhlambela, ishawari yokuhamba, indlu yangasese eyahlukileyo, ikhitshi elixhotyiswe, igumbi lokuhlala elinendawo yendalo kunye nemithi enesofa / ibhedi. Ngoko unokungena kwakho. Sinendawo yokuhlala yesibini efanayo kwesinye isitayile sabantu aba-2 onokuthi ubabone kwiprofayile yethu.
\_u00A0Ibhedi enkulu eyi-1, 1 iisofa eziyi-, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.88 out of 5 stars from 408 reviews
4.88 · Izimvo eziyi-408
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi408
Ilali yethu yindawo emnandi yokuhlala kwaye ibekwe kakuhle embindini wezidiliya, ikhusela inqaba ejikelezwe ziinqaba ezininzi, indawo yokuhlambela entle ehlaziyiweyo kunye necawe esanda kulungiswa, umtsalane wayo nawo uvela kwichibi elinomthi apho imozulu intle. okulungileyo. kuhamba siwele. Ibekwe kwindawo yelali isinika umlinganiswa ochwayitileyo kwindawo yendlu yethu. Ubukho benkonzo yethu entle, esanda kulungiswa, indawo entle eluhlaza, enemigca emithi. Uyakonwabela ukuhamba ecaleni kwechibi elikumnyango welali. Kukwakho nendawo yokuhlala yesibini yabantu aba-2 kwesinye isitayile onokuthi usifumane kwiprofayile yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Carole Et Jean-Marc
Siyabamkela abahambi bethu kunye notshintshiselwano ikakhulu ngexesha lesidlo sakusasa esinikezelwa kwigumbi lethu lokuhlala kwaye sithatha ixesha lokwazi iminqweno yabo yosuku ukuze sibakhokele kangangoko kunokwenzeka kwiisekethe ze-ballads, okanye kwiidilesi ezahlukeneyo zokutyela, iimyuziyam. , iinqaba, ukungcamla...
Sihlala silumke kangangoko sinako kodwa siyathanda ukufumaneka kwiindwendwe zethu ukuba kuyimfuneko.
Siyabamkela abahambi bethu kunye notshintshiselwano ikakhulu ngexesha lesidlo sakusasa esinikezelwa kwigumbi lethu lokuhlala kwaye sithatha ixesha lokwazi iminqweno yabo yosuku uku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corcelles-les-Arts